Nwunye Quail maka ụmụaka
Nri Nri maka ụmụaka
O doro anya na iji nsị quail eme ihe maka ụmụaka dị elu. Ha nwere vitamin ndị bara uru na ihe ndị na-edozi ahụ, ọ bara uru maka ịzụlite ahụ nwatakịrị ahụ. Na mgbakwunye, ha nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ:
Ha na-erughị ihe na-edozi ahụ karịa nkịtị. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọrịa ara ehi, quail nwere ike ime ihe ọzọ na ọkụkọ.
Mee ka ike gwụ, nye ume na ike, belata ike ọgwụgwụ, n'ihi ọdịnaya nke protein dị mfe digestible, nke dị mkpa maka ọrụ nhazi nke ọma nke ahụ dum nke nwa ahụ.
Na-enye aka na mmepe nke ike nwata.
Ha nwere ihe bara uru nke vitamin-mineral bara ọgaranya, ọnụ ọgụgụ ndị dị elu dị elu karịa nke nsen anụ ọkụkọ. N'okpuru ebe a bụ data tụnyere ụdị tebụl.
Tụkwasị na nke ahụ, nsị nchara nwere ọdịdị mara mma, nke ga-eme ka obere gọọmenti mee ihe.
Ihe ozo di n'ime shea. O nwere 90% nke carbonci carbonate, nakwa ọla kọpa, zinc, sọlfọ, fluorine, wdg. Eji nwayọọ gbarie. Ihe mejupụtara ya yiri ihe yiri nke ọkpụkpụ mmadụ na ezé. A pụrụ iji shea ahụ mee ihe maka nri n'ụdị mpempe akwụkwọ. Na-eje ozi dị ka isi iyi nke calcium, nke dị mkpa maka ụmụaka.
Ụmụaka ruo otu afọ nwere ike inye nsị quail site na ọnwa 6-8, na-enwe ọchịchọ nke allergies - mgbe otu afọ gasịrị. Tinye akwa n'ime nri nwa ahụ nke ọma, na-amalite na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nkochi ime akwa. Ọ bụrụ na enweghị ngosipụta nke diathesis, jiri nke nta nke nta mụbaa ọgwụ ahụ. Ugbu a, ka anyị lee ọtụtụ nsen a ga-enye nwata.
1-3 afọ - 1-2pcs;
3-8 afọ - 2-3pcs;
8-12 afọ - 3-4pcs;
12-18 afọ - 4pcs.
Kedu otu esi enye akwa nwa?
Ọ na-abụ na nsị quail adịghị emetụta ọrịa salmonella, a pụkwara inye nwatakịrị n'ụdị ọdịdị. N'ezie, nke a bara uru, n'ihi na n'oge ọgwụgwọ ọkụ, otu akụkụ nke uru bara uru efuola. Ezi egg nwere ihe envelops, si otú ahụ na-eme ka ọrụ nke eriri afọ na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, nnyocha ndị na-adịbeghị anya egosiwo na ọrịa nke quail àkwá ka dị, ọ bụ ezie na ọ naghị adịkarị ka ọkụkọ. Ya mere, ajụjụ a bụ ma ọ ga-ekwe omume inye ụmụaka quail nsen n'ụdị raw, kama esemokwu. Ọ bụrụ na ị kpebie inye nwatakịrị a àkwá n'ụdị ya, jide n'aka na ị ga-achọpụta na ọ ga-eguzosi ike n'ezi ihe ma kpochaa shea n'okpuru mmiri oyi.
Anyị ga-achọpụta otú ị ga-esi na-ata nsị àkwá n'ụzọ dị mma nye nwatakịrị. A gha etinye ya na pan nke mmiri oyi ma tinye ọkụ. Mgbe esi mmiri, a ga-etinye ya na nkeji abụọ, ka o wee jide ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe bara uru. Mgbe minit 15 nke esi na ya, ọ ga-efunahụ ọtụtụ n'ime vitamin ahụ, ma a na-edebe ihe niile a na-ahụ maka otu ihe ahụ.
Ọ bụrụ na nwa ahụ ekweghị eri anụ a kụrụ agwa, mgbe ahụ, a ga-enye ya nwatakịrị ahụ n'ụdị omelet.
Ntụziaka maka omelets maka ụmụ site na 1 afọ
àkwá quail -2pcs;
mmanụ ma ọ bụ mmanụ aṅụ 1 tablespoon;
N'ime obere ite mmiri, wunye ma weta obere mmiri ma ọ bụ mmiri ara ehi. Na efere dị iche iche, tụọ nsen quail 2 na akwukwo nri ma ọ bụ gbazee bọta na nnu, tinye n'ime mmiri esi na-ekpuchi ya na mkpuchi. Mgbe nkeji ole na ole, omelette dị njikere.
N'ihe niile e kwuru banyere ya nke ọma na nsị nke quail, e nwekwara ịdọ aka ná ntị. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-azụ anụ quail na-adịghị eri nri na-eri nnụnụ ndị nwere àgwà dị ala na mgbakwunye nke yist, ebu nwere ike ịnweta toxins nke nwere ike ime ka nwatakịrị ahụ egbu egbu. Zụrụ azụ si n'aka ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi.
E nwere ọnụọgụ abụọ maka iji nsen maka ụmụaka - ọnụnọ nke ọrịa ndị metụtara nri na-enweghị protein. N'okwu a, a ga-ekwesịrị iji dọmịl na-eme ihe na dọkịta.
Compote nke prunes maka ụmụ ọhụrụ
Cocktails maka ụmụaka
Chiiz casserole na ugu - akwukwo nri kachasi nma nke nri ndi di mfe
Nri maka nwa dị afọ 1
Achịkọta karọt na ome - uzommeputa
Lollipops si sugar n'ụlọ
Nri site na cheese cheese maka umu
Mmiri na hyaluronic acid
Kedu esi mee igwe ojii site na ajị anụ?
Okpokoro ọkụ a na-akpọ nkụ na ogige
Ahịa site n'ịkụcha ụmụ nwanyị
Erysipelas nke ụkwụ ala
Ọgwụ ọjọọ nke ụbụrụ maka ụbụrụ nke ọgbọ ọhụrụ
Nri na ihu - ọgwụgwọ
Nwatakịrị na èbè bụ maka ma megide
Uwe akwa akwa akwa
Calamari ọka - nhazi nke mbu maka ime nri nri di nma ma obu ihe ozo!
Jiri eji aka aka gị na-egbu nri
Symphysitis mgbe amuchara nwa
Anyị na-eji ụmụaka eme ihe n'ụzọ aghụghọ!
Jelii si na tomato
Ụlọ Shri Veeramakaliyamman
Dakwunye maka anya Eke agba